Christmas Gifts Archives - အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ
ဒီဇင်ဘာလ 2, 2016 By StellaMarice LeaveaComment
အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ:ဒီခရစ္စမတ်, သင့်ရဲ့ချစ်ရသူအဘို့အစိတ်ကူးများကျိန်းသေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မည်မဟုတ်ပါအကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကိုတင်ပြခြင်းမရှိဘဲပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပ. ကျွန်တော်တို့သည်ကအကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကို 2016 ၏စာရင်းတစ်ခုပေးအပ်တဲ့ဦးခေါင်းကသွားလော့နှင့်သင့်အဆွေတို့အဘို့တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသော Choose ပြီ,mom,, အဘ, လင်ယောက်ျား, အချစ်, ရည်းစားနှင့်မိသားစုအနည်းငယ်ဖော်ပြ.
ဘို့ ရည်းစားများအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကိုစိတ်ကူးများ,wအီးကခံယူသောသူတို့အအံ့သြသွားလိမ့်မည်ဟုဆုကျေးဇူးကိုတက်ခူးကြပြီ. သငျသညျအိမျမှာလုပ်မနိုင်လျှင်, ထို့နောက်သင်၏မေတ္တာအချိန်ကြာမြင့်စွာဆည်းဖူးနိုင်လက်ဆောင်ပေးပို့. ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်ဖြစ်ပါစေ!
1) Jaybird Wireless Bluetooth Headset X2 Sport (အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ)
Jaybird Bluetooth နားကြပ် :အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ 2016
ဘို့ သူ့အဘို့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကိုစိတ်ကူးများ,you can send your loved one this X2 Jaybird Wireless Bluetooth headset.It isabeautifully designed sports headset for hands-free enthusiasts. ဒါဟာ Bluetooth မှတဆင့်သင်အရည်အသွေးမြင့်အသံပေးရလည်ပတ်သော, အဓိကအားဖြင့် Skip-အခမဲ့ဂီတအဘို့အိမ်ပြင်. ဒါဟာတက်နေဖို့နိုင် 8 hours long playing music as well as making and receiving calls, သင်တစ်ဦးဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြု. စစျဆေးနိုငျသော. ဒီနားကြပ်တစ်ခုကျော်လုံခြုံတို့ပါဝင်သည် / နားကိုမထိုက်မတန်ရွေးချယ်စရာအောက်မှာနှင့်တစ်ဦးတစ်သက်တာများအတွက်ချွေးသက်သေပြအာမခံနှင့်အတူကြွလာ. Jaybird သည်ဤနားကြပ်နှင့်အတူဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးကမ်းလှမ်း, ထိုသို့သောမူပိုင်ခွင့်လုံခြုံတဲ့-Fit နားကိုအယပ်အဖြစ်, ကေဘယ်ကြိုးများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးစီမံခန့်ခွဲမှုကလစ်များ charging, အိတ်တင်ဆောင်လာသောဘို့ပွတ်တိုက်-မထိုက်မတန်စီလီကွန်အားကစား, Comply premium sports memory foam for ear plugs and silicone earbuds.
2) Samsung က Gear Fit စမတ်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
Samsung က Gear Fit စမတ်နာရီ: အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ 2016
ကို C များအတွက်ရည်းစားများအတွက် hristmas လက်ဆောင်များကိုစိတ်ကူးများ,the SmartWatch Samsung Gear Fit isa24/7 တက်ကြွဘဝပုံစံဘို့ဝတ်ဆင် gadget က. It comes with always-on activities to follow any track of your activity which can last all day. သင်သည်သင်၏စွန့်စားမှုခရီးသွားပေါ်မှာဝတ်ဆင်ဆဲကဖုန်မှုန့်နှင့်ရေကာကွယ်မှုနှင့်အတူကြွလာအဖြစ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမဆိုမျိုးကိုမှအခမဲ့စောင့်ရှောက်နိုင် (IP67). ဒါဟာအဆင်ပြေရဲ့, တာရှည်ခံနဲ့အလင်း. ဒီစမတ်လက်ပတ်နာရီတစ်ကွေးစူပါ AMOLED မျက်နှာပြင်ပါဝင်ပါသည်. စိတျနှလုံးအနှုန်းကိုအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူကြွလာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြံ့ခိုင်ရေးစေ့ဆော်မှုရှိတယ်. သငျသညျကို real-time အကြံဉာဏ်ကိုပေးစေခြင်းငှါဤသည်စမတ်လက်ပတ်နာရီအဓိကအားဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာ, အထောက်အပံ့နှင့်သင့်ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရရှိရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်. သင်အလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျမှအမြန်အကြောင်းပြန်အဖြစ်အခြေခံစနစ်ထိန်းချုပ်ခွင့်ပြု, ငြင်းပယ်ခံရမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်နှိုးစက်မခေါ်.
3) tile (ဗိုလ်ချုပ် 2) – Phone ကို Finder ကို. Key ကို Finder ကို. ကို item Finder ကို
Tegel (ဗိုလ်ချုပ် 2) – Phone ကို Finder ကို. Key ကို Finder ကို. item Finder ကို: အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ 2016
အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ :Tile isaBluetooth-tracker andauser-friendly application that helps you find important things that you can not lose easily, ထိုကဲ့သို့သောဖုန်းကိုအဖြစ်, သော့များ, ပိုက်ဆံအိတ်, ဝန်စည်, တက်ဘလက်, ကင်မရာများ, စသည်တို့ကို. ဒီ app ကိုစက္ကန့်တစ်မှု၌၎င်း၏အလုပ်မ . သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုတဦးရန် tile ကို fix နှင့်ခရာမှုတ်သံနှင့်အတူကသတ်မှတ်ပြီးဆက်လက်ရန်ဖြစ်ပါသည်, မြေပုံပေါ်တွင်နောက်ဆုံးလူသိများတည်နေရာများမျက်မှောက်မှာ. You can also indicate “app ကိုအပေါ်ပျောက်ဆုံးပစ္စည်းများ” နှင့် item ကိုတွေ့ရှိရပါသည်လျှင်သတိပေးခံရ. Tile နှင့်အတူ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပျောက်ဆုံးလက်စွပ်ဖုန်းကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြု, ကတိတ်ဆိတ်စွာအပေါ်င်လျှင်ပင်. ဒါဟာတာရှည်ခံသည်နှင့်တစ်ဦးကိုတံဆိပ်ခတ်နှင့်အတူကြွလာ, ရေယဉ်အမှု, တစ်ဦးအဆိုးဆုံးမိုးရာသီနေ့၌ပင်များအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး. ဒါဟာမကယ်မလွှတ်ကြောင်းသေးငယ်တဲ့စပီကာ features 90 ဒက်စီဘယ်ယူနစ်သံကို. ဒါဟာကွားနိုငျစေသည်, ပင်အနည်းငယ်အခန်းပေါင်းရှားသို့မဟုတ်အရာအခြို့ပုံအောက်မှာထားလျှင်.
4) Jackery ဧရာ + dual USB ကအိတ်ဆောင်ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ
Jackery ဧရာ + dual USB ကအိတ်ဆောင်ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ: အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ 2016
အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ: သင်တစ်ဦးရှည်လျားသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ်တယ်ဆိုရင်, လမ်းခရီးစဉ်, သငျသညျကြာရှည်ဝန်အဘို့သင့် device ကိုလိုအပ်ဘယ်မှာသို့မဟုတ်မည်သည့်အရပ်ဌာန, ထို့နောက် Jackery ဧရာ + သင့်ရဲ့စံပြကယ်တင်သောသခင်ဖြစ်သင့်. ဒါဟာကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစွမ်းရည်မြှင့်ခရီးဆောင် charger ကိုနှင့်ပြင်ပဘက်ထရီဖြစ်ပါတယ်. မျိုးစုံ devices များကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းအားသွင်းရန်အဘို့အဒါဟာနှစ်ဦးကို USB port များပါဝင်သောတစ်ဦးသည်အလွန်အမင်းမြင့်မားစွမ်းရည်မြှင့်ခရီးဆောင် charger ကိုဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါနည်းပညာကို Panasonic ကရဲ့အဆင့်တစ်ဦးက Li-ion ပေါ်လီမာကနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်, အားသှငျးထက်ပိုကြာ 500 ကြိမ်. ဒါဟာတစ်ဦးအားပြန်သွင်းနိုင်စွမ်းရည်ရှိပါတယ် 12,000 mAh ဘက်ထရီ. ဒါဟာတာရှည်ခံသည်, lightweight and comes in different colors.This gadget could be suitable for ရည်းစားများအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကိုစိတ်ကူးများ
5) FiftyThree ဒစ်ဂျစ်တယ် Stylus(အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ)
iPad အတွက် FiftyThree ဒစ်ဂျစ်တယ် Stylus အားဖြင့်ခဲတံ, Pro ကို iPad နဲ့ iPhone ကို
ခင်ပွန်းဘို့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကိုစိတ်ကူးများ:FiftyThree ခဲတံအိုင်ပက်နဲ့ iPhone devices များကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဆန်းသစ်တဲ့ဒီဇိုင်းတံဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစ FiftyThree အားဖြင့်စက္ကူဖို့ကတိပြု, များပြားအောင်လုပ်, တောင်းဘုတ်အဖွဲ့, Microsoft က OneNote, sketchbook မိုဘိုင်း, နှင့်အခြားသူများ. The ideal surface pressure is the unique point of the pencil which is formed so as to create the exclusive settings that provide the lines of different sizes. ဒါဟာသင်ပယ်ရုံလှန်နှင့်အတူကသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုမယ့် built-in ခဲဖျက် features. သင့်ရဲ့လက်ချောင်းအသုံးပြုခြင်း, သငျသညျကြမ်းတမ်းအနားချောမွေ့နှင့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အရောင်များပေါင်းစပ်နိုင်. သင်က screen ပေါ်မှာသင့်ရဲ့လက်ကိုသွင်းနှင့်မည်သည့်ထောင့်ကနေရေးသားစတင်နိုင်ပါသည်, installation သို့မဟုတ်စံကိုက်ညှိခြင်းမရှိဘဲ. ဒါဟာကို USB အားပြန်သွင်းနိုင်ဘက်ထရီနှင့်အတူကြွလာ, အပိုအစွန်အဖျား, အပိုခဲဖျက်နှင့်သံလိုက် snap.This တစ်ဦးစံပြ C ကိုဖြစ်နိုင်hristmas gifts ideas for husband
6) က JAM HX-P930 အီလက်ထရွန်နစ်အကဂီတပေါင်းကြိုးမဲ့နာယကအလင်း Show ကို
က JAM HX-P930 အီလက်ထရွန်နစ်အကဂီတ Plus အားကြိုးမဲ့နာယကအလင်း Show ကို
အ speakerphone function ကိုနှင့်သင်၏လက်ခံထားတဲ့အစွဲပေါင်းကြိုးမဲ့အလင်း Show ကိုနာယကကနေတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအဖြေ, 30 ပေအကွာအဝေးအတွင်း Bluetooth ကိရိယာမှကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး. ဒါဟာအားပြန်သွင်းနိုင်ကြောင်းနှင့်မှတက်ကိုထောက်ပံ့ပေး 10 သင်တို့အဘို့အအကောင့်အခါ, playtime ၏နာရီ3နာရီ. ကနေတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ရှေးခယျြဖို့တစ်ဦးအလင်း Show ကို option ကိုအဲဒီမှာဖွင့် 36 သင့်ရဲ့ဂီတနှင့်အတူ LED အလင်းပါတီအစီအစဉ်များ. ဒါဟာဆက်သွယ်ထားသောအဖြစ်ဟာသူ့ရဲ့ function ကိုကအသံတစ်သံ prompt ကိုအင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်, switching, စသည်တို့ကို. ဒါဟာသွားတော့ပီ၏အပြင်ဘက်၌ဖွဲ့စည်းပုံမှာရော်ဘာကာကွယ်မှု radiates လမျးပျေါမှာအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကိရိယာဖြစ်ပါသည်. JAM Trance Plus is durable and very portable.This can beaperfect match for christmas gifts ideas for your sister.
7) iHome iBN43BC Bluetooth ကိုစတီရီယို
iHome iBN43BC Bluetooth ကိုစတီရီယို: အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ 2016
သင့်ရဲ့ဘလူးတုသ်သဟဇာတ device ကို iBN43BC နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂီတ၏ကြိုးမဲ့ streaming များချိတ်ဆက်ပါ. iHome iBN43BC Bluetooth ကိုစတီရီယိုအရည်အသွေးမြင့်အသံများအတွက်အပြည့်အဝဒီဇိုင်းညစဉ်အသံစနစ်. ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသံကိုနှစျစပီကာနှင့်အတူကြွလာ. သင်ဤနိုးဖို့ကိရိယာသို့မဟုတ်အိပ်အတူ streaming များအသံနှင့်နှိုးစက်သတ်မှတ်နိုင်သည်. ဒါဟာချိန်ကိုက်ထရီဘယ်လ်နှင့်အတူပရီမီယံအသံနှင့်အတူစတီရီယို FM ရေဒီယိုရှိပါတယ်, ချိန်ခွင်လျှာနှင့်ဘေ့စထိန်းချုပ်မှု. သငျသညျ NFC ကိုနည်းပညာကိုရှိပါတယ်တဲ့ device ကိုအတူ iHome iBN43BC Bluetooth ကိုစတီရီယိုပေါင်းသင်းနိုင်. သငျသညျ speakerphone ပဲ့တင်သံ functions တွေနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့လက်ကို-အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု. သင်တို့သည်လည်းတတ်နိုင်သမျှ Bluetooth ကိုချိတ်ဆက်ဖို့အရန် input ကို၏အကူအညီနှင့်သဟဇာတမဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းတွေ. ကစားနေစဉ်ကြောင့်စက်ရုံများသည်မိုဘိုင်းကိုအားသွင်းနိုင်မယ့် USB port ကိုရှိပါတယ်.
Kindle 6: အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ 2016
mom, များအတွက်ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကိုစိတ်ကူးများ:အဆိုပါ All-အသစ် Kindle6“နေရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တောက်ပတှရေဲ့အဓိပ်ပာနှင့်သင့်မျက်စိရှေ့တော်၌ဘတ်ရန်လွယ်ကူစေသည်ရာချောမွေ့စွာ touchscreen က display ကိုနှင့်အတူကြွလာ. You can charge it once and use it for weeks as it hasahigh lifespan battery. It is lighter thanapaperback and can store thousands of books.This device can beaperfect match for Christmas gifts ideas for mom
9) Blu Studio က selfie – စမတ်ဖုန်း
Blu Studio က selfie SmartPhone: အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ 2016
အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကိုအောက်မှာ 20:Blu စတူဒီယို selfie စမတ်ဖုန်းကို Android နှင့်အတူ dual-SIM ကိုစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ် 5.1 Lollipop နှင့်များစွာသောဆွဲဆောင်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ. ဒါက unlocked အနေနဲ့ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်း. ဒါဟာ features 1.3 GHz အမြန်နှုန်းကို Quad core MediaTek 6580 ARM Mali-400 GPU ကိုအတူ processor ကို. ဒါဟာ5လက်မအရွယ် IPS Display ကိုရှိပါတယ်, 5-LED flash တို့နှင့်အတူအော်တိုဆုံ-megapixel Auto-focus မူလတန်းကကင်မရာ5LED flash တို့နှင့်အတူပြန်-megapixel ကင်မရာကိုအလယ်တန်း. ဒီဖုန်းကိုတစ်ဦး Blu နောက်ဆုံးထိ Software များတပ်ဆင်ထားသည်. ဒါဟာ 4G HSPA ဖြစ်ပါသည် + (850/1700/1900/2100), GSM quad-band smartphone.This can be great for အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကိုအောက်မှာ 20
10) မေးရိုး UP3 နှလုံးရောဂါနှုန်း, လှုပ်ရှားမှု + အိပ်စက်ခြင်း Tracker, ပတ္တမြားလက်ဝါးကပ်တိုင် (အနီရောငျ)
Pulse အားဖြင့်မေးရိုး UP3: အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ 2016
လက်ထပ်ခဲ့ပြီးခရစ္စမတ်ဆုလက်ဆောင်စိတ်ကူးများစုံတွဲများ:သငျ့နှလုံးကျန်းမာရေးကို Jawbone အားဖြင့် UP3 နှင့်အတူနေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးစောင့်ကြည့်ရန်. ဒါဟာအစထိရောက်သောအိပ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှု tracker ဖြစ်ပါသည်, သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစစ်အစိုးရနှင့်သင်တို့အသီးအသီးသောနေ့၌မီးရှို့ရမည်ကိုကယ်လိုရီကိုခြေရာခံ. သင်ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်နေ့ရက်တိုင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကျန်းမာသန်စွမ်းရွေးချယ်မှုအောင်စမတ်နည်းပြမှလုံလောက်သောထောက်ခံမှုရနိုင်. အဆင့်မြင့်အိပ်စက်ခြင်းတိကျမှန်ကန်အိပ်အဆင့် REM သီချင်းများအဖြစ်ကိုသင့်အိပ်၏အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်. သိရန်လေ့လာပါ, အလင်းနှင့်နက်ရှိုင်းသော. သငျသညျအိပျပျြောသှားသောအခါသင်တို့၏တီးဝိုင်းကိုအလိုအလျောက် detect လုပ်လိမ့်မည်. တိတ်တဆိတ်သင့်ရဲ့အိပ်သံသရာအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုသင်နှိုးသောစမတ်နှိုးစက်ရှိပါတယ်. ဒါဟာတစ်ဘက်ထရီသက်တမ်းရှိပါတယ်7နေ့ရကျ.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ချစ်ရသူမှလက်ဆောင်ကဒီခရစ်စမတ်အဖြစ်တင်ဆက်ဖို့အဘယျအချင်ကြဘူး? မှတ်ချက်များ၌သင်တို့၏အမြင်များမျှဝေ. လွယ်ကူသောတည်နေရာနှင့်ပိုပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်, ဤစာရင်းကိုလည်းထုတ်စစ်ဆေး အကောင်းဆုံးကို Christmas လောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေစိတ်ကူးများ.
Filed Under: ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ Tagged With: အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကိုစိတ်ကူးများ, အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကိုအောက်မှာ 20, အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကိုအောက်မှာ 50, christmas gift ideas 12 year old boy, christmas gift ideas 15 year old boy, christmas gift ideas7year old boy, christmas gift ideas 8 year old boy, စုံတွဲများလက်ထပ်ခဲ့ခရစ်စမတ်ဆုလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ, christmas gift ideas onabudget, christmas gift ideas tweens, christmas gifts ideas diy, ရည်းစားများအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကိုစိတ်ကူးများ, သူ့အဘို့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကိုစိတ်ကူးများ, ခင်ပွန်းဘို့ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကိုစိတ်ကူးများ, mom, များအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကိုစိတ်ကူးများ, christmas gifts ideas homemade, christmas gifts ideas pinterest, christmas gifts ideas to make
နိုဝင်ဘာလ 16, 2016 By StellaMarice LeaveaComment
အစ်မများအတွက်အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကို:သင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်ယခုနှစ်အထင်ရှားဆုံးအချိန်ခရစ္စမတ်ရာသီဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ကိုယ်လက်၏နောက်ကျောကဲ့သို့သင်၏မိသားစုကိုသိလျှင်ပင်, ဒါကြောင့်မကြာခဏသူတို့သည်သင့်အားဆိုလိုဘယ်လောက်သူတို့ကိုပြလတံ့သောသူတို့ကိုအရဘယျအရာမှထွက်တွက်ဆရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်, အားလပ်ရက်ကျော်ရုံသာမက, ဒါပေမဲ့လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်. တစ်ဦးကညီမအရမ်းနီးကပ်အမြဲတမ်းမိတ်ဆွေတစ်ဦးထက်ပိုသောသူတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. သူမသည်မကြာခဏနှစ်သက်ရန်ခက်ခဲကြောင်းနှင့်ဤသူသည်သင်တို့အစဉ်အမြဲခရစ်စမတ်အဘို့အကြှနျုပျ၏အစ်မရကိုအဘယ်သို့သိရန်ခဲယဉ်းရှာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်. အောက်တွင်တစ်ဦးစွယ်စုံအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်, သောသင်တို့သည်ဤခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရဲ့အဖြေကိုကူညီပေးပါမည် .
အဘယျသို့ခရစ်စမတ်ငါ့ညီအစ်မကိုရယူပါရန် 2017 ?
မှတ်စု: ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာရှိသမျှဆင်းတုများမှာ "နှိပ်လို့ရတဲ့". သင်အနေနဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သောဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ခုခုတွေ့မြင်လျှင်, ပိုပြီးအချက်အလက်ရရှိရန်ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါအခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး, စားသုံးသူအစီရင်ခံစာများနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်, စျေးနှုန်းစသည်တို့ကိုစစ်ဆေး.
အဘို့အကြှနျုပျ၏အကောင်းဆုံးအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုမှာ အစ်မများအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကို သင့်ရဲ့စတိုင်ပါးရည်နပ်ရည်အစ်မတစ်ဦးစျေးဝယ် network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အပေါ်ဖက်ရှင်ဤလှပသောပန်းရောင်ထွက်ဖြစ်ပါတယ် wallet.When, သူမရဲ့ငွေသားနှင့်အကြွေးကဒ်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်အန္တရာယ်ကင်းတစ်နေရာရာမှာလိုပါလိမ့်မယ်. ကိတ်ဂေါ်ပြားနယူးယောက်ကနေဒီလှပတဲ့အာရဇ်လမ်း tavy ပိုက်ဆံအိတ်ဿုံသူမ၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ fit ပါလိမ့်မယ်. သူ့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားနေသော်လည်း, ဤ 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုမှန်ကန်သားရေပိုက်ဆံအိတ် features တွေကိုပြင်ပမှာအတွင်းပိုင်းအပေါ်အိတ်ကပ်ချော်နဲ့, ပေါင်းမနည်းများအတွက်အာကာသရှစ်ကတ်များကြောင်း. ဒီပိုက်ဆံအိတ်လာသုံး-အရောင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်: Black က / Pebble, ရွှေနှင့်တက်ကြွ Snapdragon.
2. မြိတ်လက်ကိုင်အိတ် (အစ်မများအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကို)
သင့်ရဲ့ပုံစံ Sis ပြီးသားအလွန်ကြီးစွာသောပိုက်ဆံအိတ်ရှိပါတယ်လျှင်ဒါနဲ့ဘာ? ဘယ်လိုအထဲတွင်သယ်ဆောင်ရန်တစ်ခုခုအကြောင်း? ဒီရေဗက္ကာ Minkoff မြိတ်လက်ကိုင်အိတ်မှာပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်9လက်မအားဖြင့်5လက်မ, နှင့်၎င်း၏သိုင်းကြိုး over-the-ပခုံး Cross-ရင်ဘတ်၏အဖြစ်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်; ဒါကြောင့်ပင်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အစ်မမြို့ပေါ်မှာထွက်နှောင်းပိုင်းညတစ်ခုဆွဲဆောင်မှု clutch အဖြစ်အသုံးပွုနိုငျဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်.
အ sporty ညီအစ်မများအတွက်:
3. ယောဂအားကစား Bag (အစ်မများအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကို)
သင့်ရဲ့ပြိုင်ကားဆန်သောအစ်မအားကစားရုံတစ်ခရီးစဉ်ကြာလာတဲ့အခါ, သူမသယ်ဖို့အများကြီးရတယ်င်. ဒီစိတ်ကူးအလုပ်လုပ်တဲ့ကျောပိုးအိတ်သူမ၏လိုအပ်ချက်အလုံးစုံတို့အဘို့အာကာသရှိပါတယ်, ပင်သူမ၏ယောဂဖျာ! အထူးသယောဂနှင့်လိတ်နိူးဖို့ဖြည့်တင်းဖို့ Manduka ကဒီဇိုင်း, ဒီအခမဲ့သို့ သွား. 2.0 ကျောပိုးအိတ်တစ်ကိုက်ညီသောရှေ့ဇစ်အိတ်ထဲ features 26 လက်မကျယ်ပြန့်ယောဂဖျာ, သော့, ကဒ်နှင့်ဆဲလ်ဖုန်းအခန်း, နှင့်သူမ၏ရေပုလင်းများအတွက်ကြီးမားတဲ့အဓိကအာကာသ, ပဝါနှင့်ပင်တစ်လက်ပ်တော့.
သင့်ရဲ့ညီမတစ်တင်းနစ်ဝါသနာရှင်များသည်ဆိုပါက, ကိုယ့်အထဲကတစ်ခုစဉ်းစား အဘို့အခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကို (သူမ) အစ်မ အလိုတခုတည်း be this one.ကခရစ္စမတ်အချိန်ရဲ့သော်လည်း, အခါသင်ဆုလက်ဆောင်သူမ၏ဒီ Wilson ကခြောက်လသင်နွေရာသီလအတွက်သင်တို့၏အစ်မမှုကိုလိုလားကြလိမ့်မည်. တဦးတည်းလည် Effect တင်းနစ်ရက်ကက်. အဆိုပါရက်ကက်တစ် slick လာ, လက်ကိုင်အတွက်ပြိုင်ကားဆန်သောအနီရောင်နှင့်အဖြူအရောင်နှင့်အင်္ဂါရပ်ကိုအထူးတုန်ခါမှုလျှော့ချရေး. ၎င်း၏လည် Effect နည်းပညာကိုဒီရက်ကက်ဂိမ်းအတွက်တရားရုံးနဲ့အပိုမီးတောက်ပေါ်အပိုလက်မပေးသည်. သင့်ရဲ့ Sis ဘို့ Next ကိုရပ်တန့်, Wimbledon!
အပရိယာယျညီအစ်မများအတွက်:သင့်ရဲ့အစ်မပဲအပ်ချုပ်နှင့်အတူစတင်သည်သို့မဟုတ်သူမသည်ပြီးသားအဟောင်းလက်ရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ညီအစျကို CS6000i အပ်ချုပ်စက်နာရီကိုပယ်သူမ၏ချုပ်ရလိမ့်မည်. ဒီစမတ်အပ်ချုပ်စက်ကိုဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်း 60 built-in ချုပ်, တော်တော်များများ button ကိုပေါက်စတိုင်များ, တစ်ယိုခံနိုင်ရည် bobbin နှင့် variable ကိုမြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်. အဆိုပါလက်မောင်းကိုလည်းအားလုံးသင့်ရဲ့အစ်မရဲ့အပ်ချုပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်အခန်းရှိပါတယ်. အားလုံးဤကြီးစွာသော features တွေနှင့်အတူ, သင့်ရဲ့အစ်မစက် access နှင့်စက်၏ရှေ့ပေါ်တွင် LCD ကိုကွန်ပျူတာ display ကိုမှတဆင့် setting တွေချုပ်နိုင်, သူမပင်အနိမ့်အလင်း၌ built-in အပ်ချုပ်အလင်းမှကျေးဇူးတင်စကားချုပ်နိုင်.
6. ပုံကြမ်းနှင့် Drawing သတ်မှတ်မည်
ဒီတစ်ခုအဘို့အကြှနျုပျ၏အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် christmas gifts for my sister:သင့်ရဲ့အစ်မရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းအနုပညာစိတ်ကူးများနှင့်အတူရိုင်းပြေးသောအခါ, သူမတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်စက္ကူပေါ်သို့သူတို့ကိုရဖို့ရန်လိုအပ်မည်. ဒီ Deluxe နှင့်အတူထက်လက်အပေါ်သူမ၏အနုပညာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများစောင့်ရှောက်ရန်မလွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ် 134 တော်ဝင်ကနေအပိုင်းအစအနုပညာအစုံ & lang နီကယ်. အဆိုပါအစုအရောင်ခဲတံနှင့်အတူသင်၏နှမကိုတပ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်, မီးသွေးတုတ်, pastel ခဲတံ, ရောစပ်ငုတ်, သော့ပွငျ-တတ်နိုင်ခဲဖျက်နှင့်အများကြီးပို. ဒါဟာအစသေးငယ်တဲ့ mannequin လည်းပါဝင်သည်. မြေတပြင်လုံးအစုံသားရေကိုကြည့်လက်ကိုင်နှင့်အတူတစ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သုံးဆင့်ပေးသောသစ်သားအမှု၌ကြွလာ.
ပုံကြမ်းနှင့် Drawing သတ်မှတ်မည်
ဘို့စကြာမြင့်စွာအမြင့်မားဆုံးနားကြပ်အတွက်အရည်အသွေးနှင့်စပီကာနည်းပညာကိုပြောရလျှင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုနာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သူမ၏နားကိုမှကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံနှင့်သဘာပို့ဆောင်စဉ်နားကိုစတိုင်နားကြပ်ပတ်ပတ်လည်ဒါတွေဟာ SoundTrue သင့်ရဲ့ချစ်ရာသခင်သည်အစ်မမှတ်ဉာဏ်အမြှုပ်ကူ၏အစွမ်းကုန်နှစ်သိမ့်အားငါပေးမည်. နားကြပ်ပင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်အသုံးပြုရန် built-in မိုက်ခရိုဖုန်းလည်းပါဝင်သည်. အဆိုပါနားကြပ်တစ်ဦးစတိုင်အကာအကွယ်အမှု၌လာနှင့်လေးခေတ်ပြိုင်အရောင်ရရှိနိုင်ပါ.
တေးဂီတ Lover များအတွက်:
8. acoustic လျှပ်စစ်ဂစ်တာ
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ အစ်မများအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကို the Guitar. A best seller this year, ဒီ Jameson ဂစ်တာသင့်ရဲ့အစ်မ jamming နဲ့ပါတ်သက်စောင့်ရှောက်ရန်စုံလင်သောဆုကျေးဇူးကိုဖြစ်ပါတယ်. သူ့ရဲ့အစဉ်အလာအပြည့်အဝအရွယ်ဂစ်တာပုံသဏ္ဍာန်နေသော်လည်း, သူ့ရဲ့နက်ပြာရောင် burst finish ကိုအတူဤဂစ်တာအကြောင်းခေတ်ဟောင်းဘာမှမရှိဘူး, တန်းတူရေးအတွက်-built နှင့်သာသုံးလက်မမှာပါးလွှာသောမျဉ်းတစ်ကြောင်းပုံစံဒီဇိုင်းထင်. ၎င်း၏ built-in pickup မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, သင့်ရဲ့ rockin’ Sis ကိုပလပ်သို့မဟုတ်အပြည့်အဝ acoustic ကစားနိုင်ပါတယ်.
အ Glitz နှင့်ဂလမ်ညီအစ်မများအတွက်(အစ်မများအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကို):
9. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်
သင့်ရဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Sis မြို့ပေါ်မှာပျော်စရာအပြည့်ဖြည်ညထွက်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သို့မဟုတ်ပဲတနေ့အသက်ရှင်ခြင်းနေ့ကအကြောင်းသွား, သူမအမြဲသူမ၏အကောင်းဆုံးကြည့်ဖို့လိုသည်. အလျှင်းမ Bdellium Tools များတူအလွရှာဖွေနေသူမ၏စောင့်ရှောက်မည်’ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Maestro စီးရီးမိတ်ကပ် brush ကို set ကို. အဆိုပါအစုတို့ပါဝင်သည် 12 အခြေခံအုတ်မြစ်များအပါအဝင် antibacterial စုတ်တံ, မီးမောင်းထိုးပြ, မျက်နှာနှင့်မျက်စိမိတ်ကပ်စုတ်တံ. တစ်ခုချင်းစီကိုဖြီးနေတဲ့နီကယ်ချထားတဲ့ ferrule နှင့်ကြော့မှောင်မိုက်သစ်သားလက်ကိုင်ရှိပါတယ်. အဆိုပါ brushed သင့်ရဲ့အစ်မအကြာတွင်အပေါ်သူမ၏စုဆောင်းခြင်းမှထည့်သွင်းဖို့ရှေးခယျြမှု၌အပိုဖြီး Pouch နှင့်အတူတစ်စုံလင်သောအလိပ်တက်အမှု၌လာ.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ညီမတစ်ဦးစစ်မှန်တဲ့မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်တိုင်းအနုပညာရှင်တဦးတည်းသီးခြားအရာလိုအပ်ပါတယ်: ပေါ်သို့ဆေးထိုးခြင်းမှစင်ကြယ်ပတ္တူ. ဒီ Philips က PureRadiance အသားအရေသန့်စင်မှုစနစ်ဖုန်မှုန့်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရ Sonic ပဲမျိုးစုံကိုအသုံးပြုသည်, စောင်ရေတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးစဉ်အမှိုက်နှင့်ကျန်ရှိတဲ့မိတ်ကပ်. အဆိုပါ device ကိုတစ်မက်မွန်အရောင်လာနှင့်အပိုဖြီးအကြီးအကဲများကပိုပြီးထိရောက်စင်ကြယ်ဘို့ထည့်နိုင်ပါတယ်. လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီနှင့်တသားတ PureRadiance သန့်စင်ကိရိယာ box ထဲမှာရှိပါတယ်ပါဝင်သည်, တဦးတည်းပုံမှန်ဖြီးခေါင်းနှင့်တစ် exfoliation ဖြီးဦးခေါင်းကို. သူမသည်သင်တို့ထံကဤကွီးစှာသောဆုကြေးဇူးကိုလက်ခံတွေ့ဆုံတဲ့အခါသင့်ရဲ့အစ်မအစဉ်အမြဲကျေးဇူးတင်ဖြစ်လိမ့်မည်, and she will never have to deal with sticky dried-on makeup again.this is one of the favorite for အစ်မများအတွက်ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေကို
အခါသင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ချစ်သောအစ်မမှကြွလာ, သငျသညျသူမ၏အမှန်တကယ်အထူးတစ်ခုခုရှာတွေ့ချင်. မြျှောလငျ့စှာ, ဤစာရင်းတွင်သူသည်သင်၏နေ့တိုင်းစေသည်အဖြစ်ခရစ်စမတ်အဘို့သင့်ညီမအဖြစ်အထူးရဖို့အဘယ်သို့သောအကြောင်းအချို့အလွန်ကြီးစွာသောအတွေးအခေါ်များအားငါပေးမည်.
ငါ့ကိုအပြရန် 2016 အများစုမှာ Wanted လက်ဆောင်များများစာရင်း
လက်ဆောင်ပေးမယ် Card ကိုရှာပါငါ့ကိုကူညီပါ
Filed Under: ဘလော့, ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ Tagged With: best gift for sister, best sister gifts, birthday gift ideas for sister, birthday gifts for sister, birthday present for sister, christmas gift ideas for sister, အစ်မများအတွက်ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကို, christmas ideas for sisters, christmas present ideas for sister, christmas presents for sister, diy gifts for sister, funny sister gifts, gift ideas for sister, gift ideas for sister in law, gift ideas sister, gifts forasister, gifts for my sister, gifts for sister, gifts for sister birthday, gifts for sister from brother, gifts for sister in law, gifts for your sister, good gifts for sisters, present ideas for sister, presents for sisters, sentimental gifts for sisters, sister birthday gifts, sister christmas gifts, sister gift ideas, sister gifts, sister gifts for christmas, sister in law gifts, sister jewelry, sister presents, special gifts for sisters, special sister gifts, unique gifts for sister
ကလေးတွေကအဘို့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ: သင်အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေနေပါသည် Christmas Gifts Ideas ကလေးတွေကအဘို့ ဘို့ 2016, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာ webpage.There ၌ရှိကြ၏ခရစ်စမတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသီခငျြးဆိုပါချင်သောပွဲလမ်းသဘင်လေထုဖြစ်ပါသည်, ဂိမ်းကစား, အထူးသဖြင့်ကလေးများနှင့်ကိုယ့်ပျော်စရာရှိခြင်း. ထိုအခါထိပ်တန်းကစားစရာများအတွက်ခရစ္စမတ်, ခရစ္စမတ်ဆုလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ ကလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီ. မည်သို့ပင်သူတို့၏အသက်, ကလေးတွေကိုသူတို့ကသူတို့လမ်းလာကြလိမ့်မည်ကိုသိခရစ္စမတ်နှင့်ခရစ္စမတ်ကစားစရာကိုချစ်. နောက်ဆုံး, ထိုကလေးကစားစရာပဲကလေးတွေအဘို့မဟုတ်.
ကျနော်တို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကလေးများပျော်စရာရှိသည်ချင်, လွန်း. ကျနော်တို့ကထိပ်ပေါ်မှာဘာအချို့ကိုချင် 10 ခရစ္စမတ်ဆုလက်ဆောင်စာရင်း. သို့ဖြစ်., ဒီခရစ္စမတ်ကျွန်တော်တို့ကိုများအတွက်စာရင်းအပေါ်အဘယ်သို့သောအ? အဘယျသို့လူတိုင်းလိမ့်မည် (အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲသားကိုမိဘများ) စတိုးဆိုင်၌ဤအားလပ်ရက်ရာသီအတွက်ယှဉ်ပြိုင်? ပူပြင်းတဲ့ကားအဘယျ, သငျသညျကိုမေး? ပဌမ, ဤနေရာတွင်ထိပ်ပူခရစ်စမတ်ကစားစရာတစ်ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ် …
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအဓိကကစားစရာလက်လီအရောင်းဆိုင်များ၏နံပါတ်သူတို့ယခုနှစ်များအတွက်ရေပန်းစားခရစ္စမတ်ကစားစရာဖြစ်လိမ့်မည်ယုံကြည်အဘယျသို့ကြေညာ. ထိုအခါလူကြိုက်အများဆုံး ခရစ္စမတ်ကစားစရာ detect ရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်. တကယ်တော့, တစ်ရယ်စရာရုပ်ရှင်ဒီဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကပြန်လွတ်လာခဲ့သည်. အားလုံးခရစ္စမတ်နေ့စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုစဉ်ရာသီပူပြင်းတဲ့ကစားစရာများအတွက်လွန်မိပြီရှာဖွေရေးအပေါ်ခရစ္စမတ်ရှေ့တော်၌ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖခင်အကြောင်းအာနိုး Schwarzenegger.Its နှင့်အတူ Jingle အားလုံးသည် Way ကို.
သငျသညျရှေးခယျြမှုနှင့်အတူသဘောကျသို့မဟုတ်သဘောတူမပြုစေခြင်းငှါ; ဒါပေမဲ့သင့်ကလေးကိုသူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏အာရုံထိပ်ခရစ္စမတ်ကစားစရာတယောက်ပေါ်တွင်တင်လျှင်, ဘာမှလုပျမညျ. ကလေးများအတွက် fit နှင့်သူတို့၏အဆွေခင်ပွန်းလုပ်နေကြအဘယ်သို့ပြုလို. သူတို့ကလူသားရဲ့အိပ်မက်စျေးကွက်နေကြတယ်. အဖြစ်မကြာမီကလေးကစားစရာများ၏စိတ်ကူးက, အဘယ်သူမျှမရောင်းချခြင်းလိုအပ်ပါသည်; ထုတ်ကုန့်စင်ပေါ်ပယ်ပျံသန်း – အားလုံးမိမိတို့ကိုယ်အားဖြင့်.
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီအလုပ်အမှုဆောင်ရှားပါးမှုခရစ်စမတ်မှာအမြဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်, ဒါကြောင့်မိမိအကွံဉာဏျဖြစ်ပါသည်: သင်ထို့နောက်ကလေးများသို့မဟုတ်လေးတွေအဘို့အလိုခငျြသောအရာကိုသိလျှင် , အစောပိုင်းဝယ် – ကြောင်း,သငျသညျခရစ္စမတ်နေ့၌စိတ်ပျက်မျက်နှာများကိုမြင်ချင်ကြဘူးဆိုရင်။. တကလူကြိုက်များခရစ္စမတ်ကစားစရာကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သူတစ်စိတ်ကူးယဉ် demented ဖခင်မှရယ်စရာပေမဲ့, ငါ့ကိုယုံ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့၏အဖြစ်မှန်ကအခြေအနေမှာသည်မှာထိုမှမဟုတ်.
ထိုအခါသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကိုအောင် 2016 ကလေးတွေအဘို့နှင့်ကိုယ့်ကဒီမှာအမျိုးပေါင်းထွက်ခွဲထားခဲ့သည်ကြပါပြီအမြန်ရွေးချယ်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေး … ရုံမှတဆင့်သွားနှင့်ပျော်မွေ့!
ကလေးတွေကများအတွက်အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ 2016 – ပူပြင်းတဲ့ခရစ္စမတ်ကစားစရာ
1. rip Rider 360 လွင့်မျောနေသောစီးနင်တွင်
ကျောင်းသားသမီးတို့အဘို့ကိုအကောင်းဆုံးကစားစရာတယောက် Named 2009 မိဘများအနေဖြင့်မဂ္ဂဇင်း, ဂန္ BigWheel အ Rip Rider ၏နိဒါန်းနှင့်အတူပြန်လှုပ်ရှားမှု၌ဤနှစ်ဖြစ်၏ 360 လွင့်မျောနေသောစီးနင်တွင်. ငါးနှင့်အထက်အဘို့အမြင်းစီးသူရဲအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ကဒီသုံးဘီးဆိုင်ကယ် Rip Rider ခစျြလိမျ့မညျ 360 လွင့်မျောနေသောနှင့်ကမ်းရိုးတန်းဆင်းနှင့်မည်သို့လွယ်ကူသောကြောင့်လဲကျဖို့ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါမြင်းစီးသူရဲကိုအတော်လေးရှိတဲ့ drive သည်နှင့်နောက်ကျောတာယာအပေါင်းတို့သည်လမ်းတဝိုက်လှည်. ဒီသုံးဘီးဆိုင်ကယ်, ၎င်း၏ယခင်နှင့်မတူဘဲ, ပလတ်စတစ် frame ကိုဆန့်ကျင်အဖြစ်ကနူးညံချောမွေ့စီးနင်းစေသည်ဒါကြောင့်တစ်ဦးသံမဏိဘောင်ရှိပါတယ်.
သင်တုန်း Rip-Rider 360 လွင့်မျောနေသောစီးနင်-တွင်
2. Fisher က-စျေး iXL 6-In-1 သင်ယူစနစ်
အဆိုပါ iXL6တွင် 1 စနစ်ကအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်6တဦးတည်းနှင့်သေတ္တာထဲကခြောက် applications များအသီးအသီးအဘို့အဆော့ဗ်ဝဲနဲ့လာခြောက်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များ. ခြောက် applications တွေကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်သူကိုပါဝင်, ဂိမ်းကစားသမား, notepad, အလုပ်ရုံ, MP3 ပလေယာနှင့်ဓာတ်ပုံကြည့်ရှုသူ. အ Vtech VReader နှင့်ဝသကဲ့သို့, အပြန်အလှန် iXL System ကိုသူတို့ရဲ့ဝေါဟာရဖတ်ခြင်းနှင့်ချဲ့ထွင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်သုံးရာခုနစ်ပါးမှအနှစ်ကလေးများအားပေး.
Fisher က-စျေး iXL 6-In-1 သင်ယူစနစ် (ပန်းရောင်)
3. Nerf N-Strike Stampeders လိမ်လည်မှုများ Blaster
တစ်ဗီဒီယိုကလစ်နှင့်အတူအပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားတဲ့6လှံလက်နက်အဖြစ်သုံး 18 ခုန်ကလစ်များ, အ Nerf N-Strike Stampeders လိမ်လည်မှုများ Blaster သူတို့ကိုပျော်စရာအဖုံး၏နာရီပေးသောပူဇော်ဖို့ချည်နှောင်ကြောင်းရှစ်နှစ်နှင့်အထက်ရေနံစည်ပေါင်းလျင်မြန်စွာစွမ်းအား၏သားသမီးတို့အဘို့ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်.
4. Squinkies မယားအံ့အားသင့်စရာ Bakeshop
သားသမီးသူမ၏မုန့်နှင့် pastries အတူကိတ်မုန့်နှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်အောင်အ Squinkies မယားအံ့အားသင့်စရာ Bakeshop ဖွင့်နိုင်ပါသည်. အံ့အားသင့်စရာ Bakeshop သားသမီးတစ်မွန်းကျပ်အန္တရာယ်သုံးနှစ်နှစ်အောက်နိုင်သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းရှိုးဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်သူ, Blip ကစားစရာ, သားသမီးလေးယောက်နှစ်နှင့်အထက်အ Squinkes မယား Bakeshop အကြံပေး. အဆိုပါ Squinkies Bakeshop ပြဇာတ် button ကိုမယားသို့အကြွေစေ့လှည့်နှင့်ထည့်အားဖြင့်၎င်း, Squinkies မယားအ Bakeshop အံ့သြကြောင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်.
Blip Squinkies မယားအံ့အားသင့်စရာ Bakeshop (Recolor)
တစ်သီချင်းဆို-a-ma-jig ဖြစ်ပါတယ်အတိအကျဘာ? ကောင်းစွာ, တစ်သီခငျြးဆို-a-ma-jig အဆိုပါသီချင်းဆို-A-Ma-Jigs ့တစ်ဦး! ဇာတ်ကောင်များ၏™အုပ်စု. ထိုအရုပ်၏နာမတော်ကိုတစ်ဦး apt ဖြစ်ပါသည်
ဖေါ်ပြချက်. တစ်ဦးကမနာသီချင်းဆို-a-ma-jig ငယ်လေးတစ် plush ဖြစ်ပါသည်, အကြောင်းခုနစျပါးလက်မရှည်လျား squeezable ကစားစရာ, ထို “သီဆို” သငျသညျသူမ၏ဝမ်းအပေါ်လမ်းလျှောက်ကြသောအခါ. မိုက်မဲပုံရသည်? ဖြစ်နိုင်တယ်. သို့သော်ထိုသို့ပျော်စရာဖြစ်ပါသည်? အဲဒီအကြောင်းမျှသံသယရှိပါတယ်. ဒီတော့သီချင်းဆို-A-Ma-Jigs တွေ့ဆုံရန်! ထိန်းညှိဖို့™ –တစ်စမတ်နာမကိုအမှီနှင့်အတူစမတ်ထုတ်ကုန်. ၏နွေဦး၌စတင်မိတ်ဆက် 2010, တစ်မူထူးခြားသော၏ဤအုပ်စု, zany ဇာတ်ကောင် – Mattel ရဲ့ Fisher က-စျေးဌာနခွဲအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး – အကယ်စင်စစ်သင့်ရဲ့မျက်နှာနှင့်မွေ့လျော်အပေါ်မည်သည့်ကလေးသည်တစ်ဦးပြုံးထားမည်. အဆိုပါသီချင်းဆို-a-ma-jigs ယခုနှစ်လူကြိုက်အများဆုံးကစားစရာတယောက်ဖြစ်ဖို့ကတိပေး.
Mattel အဆိုပါသီချင်းဆို-A-Ma-Jigs Duet – Puppy နှင့်အတူ Red အ
6. Truck ကားနှင့်ထွန်စက်(ကလေးတွေကအဘို့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ)
ပူခရစ်စမတ်ကစားစရာတစ်ခုမှာ, အ Truck ကားနှင့်ထွန်စက်မြေပြင်အနေအထားအမျိုးအစားအားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်မယ့်လေးဘီး drive ကိုထရပ်ကားဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကိုးလက်မ treaded ရထားဘီးနှင့်တစ်ဦးကြီးမားသောနှစ်ခုပေရှည်လျားကိုယ်ခန္ဓာ features. ဒီအံ့သြစရာစိမ်းလန်းသောစက်၏အမှန်တကယ်ရှုထောင့်ဖြစ်ပါတယ် 28.6 လက်မအားဖြင့် 19.4 လက်မအားဖြင့် 18.2 ကသေးအကြီးမားဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအောင်. အသက်အရွယ်ခြောက်ခုနှင့်တက်ဘို့အကြံပြု, အ Truck ကားနှင့်ထွန်စက်ရုံခရစ္စမတ်နံနက်ပိုင်းတွင်သင့်ကလေးကိုလုယူလိမျ့မညျ.
ယောဟနျသမင် Sandbox ယာဉ် 2CV, Truck ကားနှင့်ထွန်စက်
7. Justin Bieber ကိုသီချင်းရုပ်
ဂီတကမ်ဘာပျေါတှငျအပူဆုံးသီချင်းဆိုသံလွင်ပင်အရသာတစ်ခုမှာ Dolls.Justin Bieber ကို Doll Collection ကိုသီဆိုထို Justin Bieber ကိုတဆင့်အားလပ်ရက်များအတွက်သင်နှင့်အတူအိမ်ပြန်သွားနိုင်ပါတယ်ထိပ်၌ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် 10 ခရစ္စမတ်ကစားစရာစာရင်း. ဒါဟာဆက်ဆက်ခြောက်ခုမှအသက်မိန်းကလေးများလူကြိုက်အများဆုံးကစားစရာတယောက်ဖြစ်လိမ့်မည် 15 အသက်အနှစ်ဒီအားလပ်ရက်ရာသီ.
အဆိုပါတံတားတိုက်ရိုက် Justin Bieber ကိုသီချင်းရုပ်
8. ထိုအမှိုက် Truck ကား Stinky
အပြန်အလှန်ကစားစရာ၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Matchbox Big တူးစင်ရဲ့ buddy လိုင်းချိတ်တွဲဒီနှစ် Stinky အအမှိုက် Truck ကား. ကလေးများသည်သုံးနှစ်နှင့်အထက် Stinky အအမှိုက် Truck ကားကြီးကြပ်မှူးနဲ့လွယ်ကူတဲ့တင်ခဲ့သည် Stinky ရဲ့အခန်းရွှေ့ကြောင်းအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်, ရထားဘီးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှား. သူတို့ကဒီကစားစရာ၏ exuberant ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျကြနှင့်၎င်း၏ထက်ပိုပါလိမ့်မယ် 90 လိမ္မာပါးနပ်စာပိုဒ်တိုများနှင့်အသံ.
Matchbox Stinky အအမှိုက် Truck ကား
9. Bigfoot Monster(ကလေးတွေကအဘို့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ)
Fisher က-စျေး Image ကိုလာမည့် Big Foot The Monster:ဒါဟာကြီးမားသည်နှင့်သင့်အိမ်နှင့်သင့်သူငယ်၏နှလုံးထဲသို့၎င်း၏လမ်းလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်: အ Bigfoot Monster.Bigfoot အပါဝင်ကြိုးမဲ့ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသက်ရှင်ခြင်းမှကြွလာ. သူကအိပ်ချင်စေနိုင်ပါတယ်, အမျက်ထွက်သော, ပျြောရှငျသော, သို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းဖွယ်. Bigfoot လမ်းလျှောက်နိုင်, စကားပွော, ဝါး, ဘောလုံးတလုံး burp နှင့်ပစ်. သူကဘောလုံးကိုအဘို့အဆင်သင့်သောအခါသူသင်သိပါစေ, သို့ဆိုအဖြစ်စာပိုဒ်တိုများထိုကဲ့သို့သော “ကစား”; andhe ပို. ပင်ပျော်စရာအဘို့အဘောလုံးကိုပစ်နိုင်ပါတယ်. Bigfoot Monster action ကိုကိန်းဂဏန်းမိမိအကျင့်တို့ကိုသင်ယူခဲ့သည်, အမြဲတမ်းတစ်ဦးယဉ်ကျေးကမ်းလှမ်း “တဆိတ်လောက်” သငျသညျစာရွက်များထုတ် burp အခါ,. သူအမျက်ထွက်မယ့်အခါသင်သူ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်မည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့ Fisher က-စျေးနှုန်းတူလာမည့် BIGFOOT အ Monster ကိုမြင်ယောင်ကြည့်.
10.Kung Zhu ဟမ်းစတား(ကလေးတွေကအဘို့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ)
Kung Zhu ဟမ်းစတားသူတို့၏အရင်အတိုင်းဤရာသီအဖြစ်ကြီးတွေဖြစ်သွားကြသည်, အ Zhu Zhu အိမ်မွေးပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်ကြီးမားခဲ့ကြ; ထိုသို့အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုဖို့လွယ်ကူင်. တကယ်တော့, သူတို့ပြီးသားထိပ်ရာ၌ခန့်ထားပြီ 10 ပူပြင်းတဲ့ကစားစရာဒီအားလပ်ရက်ရာသီစာရင်း. ထိုချစ်စရာနှင့် cuddly Zhu Zhu ဟမ်းစတားမတူဘဲ, Kung Zhu တိုက်ပွဲဟမ်းစတားပြင်းစွာသောအတိုက်ပွဲများစက်တွေရှိပါတယ်. သူတို့ကစစ်တိုက်ဂီယာနှင့်တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်နှင့်အတူတစ် edgier အသွင်အပြင်များ. Kung Zhu တိုက်ပွဲဟမ်းစတားနှစ်ဦးမတူညီတဲ့မျိုးရှိပါတယ်, အထူးတပ်ဖွဲ့အုပ်စုတစ်စုနှင့် Ninja Warrior တစ်စု. သူတို့ခါးအဆုံးမှတိုက်ထုတ်လျှင်တစ်ဦးတည်းသာအုပ်စုအနိုင်ရလိမ့်မည်.
Kung Zhu Ninja Warrior တိုက်ပွဲ Hampster Azer
သင့်အနေဖြင့် Calico Critters မြို့တွင်းစုပေါင်း၏အမှု၌သင်တို့သည်ဤတိရစ္ဆာန်များအဘို့သာယာသောအိမ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိအရာအားလုံးတွေ့ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါမြို့တွင်းစုပေါင်းလူနေမှုအဘို့အလေးခန်းနှင့်အတူတပ်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်, စားသို့မဟုတ်ငြိမ်ဝပ်ရာ. အထက်အသက်အရွယ်သုံး၏သားသမီးတို့အဘို့ Gone, အ Calico Critters Townhome ဆိုကလေးတစ်ဦးဖန်တီးမှု outing ပေးသည်. အဆိုပါ Critters မြို့တွင်းစုပေါင်းအတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်ခဲ့သည့်မြတ်သောကစားစရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Calico Critters အစုံသို့မဟုတ်မိသားစုများအတွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်. ဤရွေ့ကားကစားစရာဝံထံမှအထိ, ခွေး, ဖား, ကြောင်, ကြွက်တွေ, ယုန်နှင့်ပိုပြီးရှုပ်ထွေး. သင်သည်သင်၏အများဆုံးချစ်ရာသခင်သည်ပူနွေးသောသွေးတိရစ္ဆာန်မိသားစု Calico Critters Townhome ဝယ်ယူကယျတငျနိုငျ.
ku အဘယျသို့? Cuponk! ဒါဟာအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူအားဖြင့်ကစားနိုင်မယ့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်, ထုတ်လုပ်သူအသက်အရွယ်ငါးခုနှင့်အထက်အကြံပြုသော်လည်း; ထိုသို့အားလပ်ရက်ရာသီနီးလာအဖြစ်ပိုပြီးလူကြိုက်များလာ. Hasbro ဖွငျ့, ဒီဂိမ်းသုံးခုကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းတကယ်ရှိပါတယ်: အ Cuponk! – Gorillanator, Cuponk! – အယ်လ် Campeon နှင့် Cuponk! – R.I.P ဂိမ်းစို့. သငျသညျကွာခဏတီဗီသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကနေကလေးတွေရဖို့ကြိုက်နှစ်သက်လိုလျှင်.
Cuponk! – သဘာဝဘေးနှင့်အတူ Gorillanator
13. အကအခုန်စတားကို Mickey(ကလေးတွေကအဘို့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ)
မိသားစုကို Fisher ကစျေးကစားစရာမှ Dance စတားကို Mickey ၏ထို့အပြင်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုမြင့်မားမိတ်ဆက်ဖို့သူတို့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများယူခြင်း, Fisher ကစျေးဒီအားလပ်ရက်ရာသီအခြားဆုရှင်ရှိပါတယ်. အကအခုန်စတားကို Mickey ထိပ်ပေါ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် 10 ပူပြင်းတဲ့ခရစ္စမတ်ကစားစရာများစာရင်း. ဒါဟာအစဉ်အဆက်အများဆုံးကာတွန်းကားကို Mickey Mouse ကိုကစားစရာဖြစ်ပြီးမှသားသမီးတို့အဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် 18 အဟောင်းခြောက်နှစ်လ. Fisher ကစျေးအကစတားကို Mickey လမ်းလျှောက်, ဆွေးနွေးပွဲ, အသစ် groove အမျိုးမျိုးအတွက်သီဆိုခြင်းနှင့်ခြင်းသည်ကခုန်. ခြောက်ခုပုဒ်စုစုပေါင်းရှိပါတယ်, သီချင်းတွေအပါအဝင် “သင့်ရဲ့ Groove အရာကိုလှုပ်” နှင့် “Offa ဒါကအရာ Up ကိုရယူပါ”, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်၏နာမည်ကျော် moonwalk အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောခုန်တဲ့အရေအတွက်.
အကအခုန်စတားကို Mickey Fisher က-စျေးဒစ္စနေးရဲ့
14. Leapster Explorer ကိုသင်ယူဂိမ်းစနစ်
ကလေးများကျောင်းမှာသင်ယူသောကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုနောက်ထပ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်အဘို့အတစ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာလမ်းများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုခုသင်ယူဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သော Leapster Explorer ကိုသင်ယူဂိမ်းစနစ် Isa လက်ကိုင်ဂိမ်းစက်ကို. ဒါဟာကလေးတွေအဘို့အခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ 4-9. အ Leapster Explorer ကိုအတူ, သားသမီးဒိုအ Explorer နဲ့ဒါဂတ်စကာ၏ Penguins တူသူတို့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်နှင့်အတူသင်ယူခံစားနိုငျ. အဆိုပါဂိမ်းထိုကဲ့သို့သောသင်္ချာအဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ပေး, စာဖတ်ခြင်း, phonics, ပထဝီဝင်, သိပ္ပံပညာ, ဂီတနှင့်ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင် Leapster Explorer ကိုသင်ယူဂိမ်းစနစ် (စိမ်းလန်းသော).
ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင် Leapster Explorer ကိုသင်ယူဂိမ်းစနစ်အစိမ်းရောင်
15. သူလျှို Net ကဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့(ကလေးတွေကအဘို့ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ)
အဆိုပါသူလျှို Net ကဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှတက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်မယ့်စစ်မှန်တဲ့ပြုပြင်သောဗီဒီယိုကင်မရာနှင့်မိုက်ခရိုဖုန်း 20 ဗီဒီယိုနှင့်အသံမိနစ်. မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်များ၏အရည်အသွေးကုန်ပစ္စည်း၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်အခြေခံအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းလှ၏. အဆိုပါသူလျှို Net ကလျှို့ဝှက်ချက်မစ်ရှင်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, အချိန်ဓါတ်ပုံတွေကိုသက်တမ်းကုန်သကဲ့သို့သင်တို့လည်းဓါတ်ပုံတွေကိုယူနိုင်ပါသည်. ထုတ်လုပ်သူရှစ်နှစ်အကြံပြုနှစ်အောက်သားသမီးတို့အဘို့မက. မြင့်မားတဲ့နည်းပညာသူလျှို features တွေနှင့်အတူထုပ်ပိုး, တကယ်သူလျှို Net ကရပ်တည်တဲ့အင်္ဂါရပ်: လြှို့ဝှကျမစ်ရှင်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့.
သူလျှို Net က: လြှို့ဝှကျမစ်ရှင်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
16. ပူပြင်းတဲ့ဘီး R ကို / C ကို Stealth ပြိုင်ပွဲမော်တော်ကားစီး
ကလေးများရှစ်နှစ်နှင့်အထက်အဟော့ဘီး R ကိုမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ် / C ကို Stealth အဓိကအားကြောင့်မြန်နှုန်း၏ပြိုင်ပွဲမော်တော်ကားစီး, သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း. ဒါကြောင့်နောက်တဖန်, ပူပြင်းတဲ့ဘီးကသူ့သစ်ကိုခေါက်နှင့်အတူနေအိမ်ပြေးဝင်တိုက်ခဲ့သည်, အိတ်အရွယ်ကား – ရုံအားလပ်ရက်များအတွက်အချိန်အတွက်. အဆိုပါဟော့ဘီး R ကို / C ကို Stealth ပြိုင်ပွဲကားအဘယ်သူ၏ခြံနှင့်ပေါင်းစပ်ကိုင်ဆောင်သူ transmitter ကိုတစ်သုံးလက်မအရွယ်အသေးစားပြိုင်ကားကားဖြစ်ပါတယ်စီး / ကားကိုအဝေးမှ. ဤကဏ္ဍတွင်အများစုဟာဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ထားသောမော်တော်ကားသီးခြားတွင်ရှိသော RC transmitter ကိုပါဝင်ပါသည်; နှင့်သော Stealth ပြိုင်ပွဲကားထိုကဲ့သို့သောဆန်းသစ် R ကိုစီးစေသည်ကားအဘယ်သို့ / C ကိုကစားစရာ.
ပူပြင်းတဲ့ဘီး R ကို / C ကို Stealth ပြိုင်ပွဲမော်တော်ကားစီး – အနီရောငျ
ငါသည်သင်တို့ပေါ်မှာရှိသမျှစာရင်းပစ္စည်းများကိုချစ်မျှော်လင့်ပါတယ် အကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များအကြံပြုချက်များ 2016 ကလေးတွေကအဘို့
Filed Under: ဘလော့, ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ Tagged With:5gift rule christmas, best gifts for boys, best gifts for kids, best gifts for kids 2016, birthday gifts for boys, birthday gifts for kids, boys christmas presents, boys gift ideas, cheap gifts for kids, christmas gift ideas for kids, christmas gifts for boys, christmas gifts for children, christmas gifts for kids, christmas ideas for kids, christmas present ideas for kids, christmas presents, christmas presents for boys, christmas presents for kids, cool christmas gifts for kids, cool gifts for kids, gift ideas for boys, gift ideas for children, gift ideas for kids, gift ideas for kids who have everything, gifts for boys, gifts for children, gifts for kids, gifts for kids indias, gifts for kids under, gifts for kids under 10, gifts for kids who have everything, handmade christmas gifts, homemade christmas gift ideas, homemade christmas gifts, kids christmas gifts, kids christmas presents, kids gift ideas, kids gifts, unique christmas gifts for kids
ထိပ်တန်း 100 အားလုံးအချိန်ကိုအကောင်းဆုံးခရစ္စမတ်ရုပ်ရှင်တွေ
နိုဝင်ဘာလ 15, 2016 By StellaMarice LeaveaComment
Filed Under: ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ Tagged With: 10 best movies of all time3, all christmas movies, best christmas films, အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်တွေ, best movies of the 2000s, christmas classic movies, christmas films, christmas films 2013, christmas films list, christmas movie classics, christmas movies, christmas movies 2015, christmas movies 2016, christmas movies for kids, christmas movies hallmark, christmas movies list, christmas movies online, christmas movies to watch, classic christmas movies, family christmas movies, good christmas films, good christmas movies, kids christmas movies, list of 2015 christmas films, list of 2016 christmas films, list of christmas movies, old christmas movies, romantic christmas movies, the best christmas movies, the christmas list movie, this christmas movie, top 10 christmas movies, ထိပ်တန်း 100 Christmas movies, top 100 movies 2016, top 100 movies of 21st century, top 100 movies of the 2000s, top christmas films, top grossing movies of all time, top movies this week, top rated movies 2015, top ten christmas movies, watch christmas movies, xmas films, xmas movies
အဘယျသို့ခရစ်စမတ်များအတွက်သင့်ဖေ Get ရန်(အဖေအတွက်ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်)
နိုဝင်ဘာလ 6, 2016 By StellaMarice LeaveaComment
အဘယျသို့ခရစ်စမတ်များအတွက်သင့်ဖေ Get ရန် (အဖေအတွက်ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်):ခရစ်စမတ်အဘို့သင့်အဖေရကိုအဘယ်သို့သိမနေပါနဲ့ 2016? ဒီမှာ, ငါတို့သည်သင်တို့သင်၏အဖေများအတွက်စုံလင်သောလက်ဆောင်ကိုရွေးချယ်ပါကကူညီလိမ့်မယ်.
အဘယျသို့ခရစ်စမတ်များအတွက်သင့်ဖေ Get ရန်:ခရစ္စမတ် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုတကမ္ဘာလုံးကျင်းပသောလူတိုင်းမျှော်ကြည့်နေသည်. လူသူတို့ကိုလောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေပေးခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့အဖေနှင့်သူတို့၏ဘဝအသက်တာ၌အခြားအရေးကြီးသောလူတို့အား၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခိုင်မာအောင်ရန်အဘို့အဒါဟာစုံလင်သောအခိုက်ဖြစ်ပါသည်. မြားစှာသောဆုကြေးဇူးကိုပစ္စည်းများဈေးကွက်ထဲမှာရှိပါတယ်အဖြစ်, တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးဖေအဘို့အညာဘက်ကိုဆုလက်ဆောင်ကောက်ရန်အဘို့အခက်ခဲရှိနိုင်ပါသည်. သင်ဤခရစ္စမတ်ရာသီအတွင်းသင့်ရဲ့အဖေပေးစေခြင်းငှါအဘယ်သို့သောအကြောင်းရှုပ်ထွေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အဖေကိုငဲ့ကှကျလိမ့်မည်လက်ဆောင်ကိုရွေးချယ်ဖို့သင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်. အောက်တွင်အမျိုးမျိုးသောအကျိုးစီးပွားများအတွက်အမျိုးမျိုးသောဆုလက်ဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်.
စာမျက်နှာမာတိကာ (အဘယျသို့ခရစ်စမတ်များအတွက်သင့်ဖေ Get ရန်)
1 အဘယျသို့ခရစ်စမတ်များအတွက်သင့်ဖေ Get ရန် 2016
2 shutterbugs I.For
3 II.Exercise စိတ်အားထက်သန်
4 III.For Tech မှစိတ်အားထက်သန်
5 အ Debonair နှင့်မထိမခိုက် IV.For
6 V.For Movie, ရိုက်ကူး
8 VII.For စွန့်စားမှု / တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တောင်တက်စိတ်အားထက်သန်
9 အနုပညာနှင့်ပန်းချီဝါသနာအိုး VIII.For
10 IX. DIY အထူးကုများအတွက်
အဘယျသို့ခရစ်စမတ်များအတွက်သင့်ဖေ Get ရန် 2016
shutterbugs I.For (အဘယျသို့ခရစ်စမတ်များအတွက်သင့်ဖေ Get ရန်)
အဆိုပါ 50mm စံမှန်ဘီလူးမြတ်သောနှင့် lifelike ဓါတ်ပုံနှင့်သဘာ-ရှာဖွေနေရိုက်ချက်များကမ်းလှမ်း. ဒီကိုတင်ပြ 2.7 သင့်ရဲ့အဖေမှတစ်နှစ်လျှင်အာမခံနှင့်အတူလက်မမှန်ဘီလူးနှင့်သူ၏ရာ၌ခန့်ထားပြီ 2014 Christmas seasonamemorable one. (အသေးစိတျ ...)
2.ကို Canon PowerShot SX510 HS 12.1 အမတ် CMOS ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ
တစ်ဦး 24mm wide angle မှန်ဘီလူးနှင့်အစွမ်းထက် 30x optical zoom ကိုတပ်ဆင်ထား, ကို Canon PowerShot SX510 HS ပင်ဝေးသောအကွာအဝေးကနေပုံရိပ်တွေကိုဖမ်းယူနိုင်စွမ်း. လက်၌ဤကင်မရာ, your dad will be able to capture everything that interest him and getaperfect image of them. (အသေးစိတျ ...)
3.SanDisk အလွန်အမင်း Pro ကို 64GB အဆင့် SDXC UHS-1 မြန်နှုန်းအတန်းအစား3(U3) 95MB / s အမြန်နှုန်း Up ကိုနှင့်အတူ & 4K သည်က Ultra HD-အဆငျသငျ့, စိတ်ပျက်-အခမဲ့ထုပ်ပိုး SDSDXPA-064G-AFFP
ထိုအချိန်ကာလ၏နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ Created, ဒီ SanDisk SDSDXPA-064G-AFFP အပြည့်အဝ HD ဗီဒီယိုရိုက်ကူး. ဒါဟာဖတ်နေစဉ်ကဒ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအဖြစ်ခြုံငုံဒေတာသမာဓိတိုးမြှင့်များအတွက်အဆင့်မြင့်အမှားဆုံးမသော code ကိုအင်ဂျင်ကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်ရေးထားဖြစ်ပါတယ်. It is definitely one of the best gift items to offerashutterbug dad during this Christmas celebration . (အသေးစိတျ ...)
(အဘယျသို့ခရစ်စမတ်များအတွက်သင့်ဖေ Get ရန်)
4.Diamondback စက်ဘီး 2014 Sorrento တောင်တန်းစက်ဘီးစီး 26 လက်မဘီးနှင့်အတူ
ခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ဖန်တီး shaman altus 7spd နောက်ဘက် derailleur တပ်ဆင်ထား, 26-လက်မဘီး, 60မီလီမီတာခရီးသွားရပ်ဆိုင်းမှုလမ်းဆုံလမ်းခွ, butted 60061-T6 လူမီနီယမ် Sorrento MTN / Path ကိုဘောင်, this mountain bike will makeaperfect gift for your dad for this Christmas. (အသေးစိတျ ...)
5.Bowflex SelectTech Adjustments Bench စီးရီး 5.1
30 နှစ်တာဘောင်အာမခံနှင့်အတူ, တစျနှစျကူရှင်ချုပ်အာမခံ, ခြောက်ခုကွဲပြားခြားနားသောရာထူး setting ကိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ခြေထောက်ကိုင်-Down, ချိန်ကိုက်ခုံတန်းရှည်၏ဤပုံစံကိုသင့်အဖေကသူ့ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည်, တစ်ဦး enviable ကိုယ်ဟန်အနေအထားတည်ဆောက်ရန်နှင့်အစဉ်အမြဲတက်ကြွမထိုက်မတန်ဖြစ်လာ. You’ll become the adorable child of his father if you get this adjustable bench for him. (အသေးစိတျ ...)
6.Bowflex SelectTech 1090 ချိန်ညှိ Dumbbell (တခုတည်းသော)
ဒီ dumbbell အများအပြား dumbbells ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်စေမှုနှင့်အတူ, သင့်ရဲ့အဖေနေ့တိုင်းတက်ကြွစွာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်. အဆိုပါအလေးချိန်နှင့်အတူချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်5ကနဦးကနေပေါင်နှစ်တိုး 10 တက်ပေါင် 90 ရုံဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏လှည့်ကွက်မှာပေါင်. (အသေးစိတျ ...)
7.CW-X ကို conditional ယောက်ျားရဲ့ Wear 3/4 Stabilyx တင်းကျပ်စွာ
အရည်အသွေးပြည့်ပစ္စည်းကိုနှင့်ဖွဲ့, ဒီတင်းကျပ်စွာလျှော့ချကြွက်သားတုန်ခါမှုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ကို web ကမ်းလှမ်း, ဒူးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ core ကိုမှကြောက်မက်ဘွယ်ထောက်ခံမှု. It will makeasuitable gift forayoung exercise enthusiast dad. (အသေးစိတျ ...)
8.ဆော်လမွန်အမျိုးသားများရဲ့ Speedcross3Trail Running ဖိနပ်
ဒီတိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းရိုက်ကူးဖေတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးပြေးဖိနပ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဆောင်းကာလကို-အဆင်သင့် contagrip outsole features, ရော်ဘာတစ်ဦးတည်းသော, ဆေးထိုး-ပုံသွင်း EVA midsole, ဇာအိတ်နှင့်အတူ QuickLace စနစ်က. The running shoe is made withasynthetic and mesh material. (အသေးစိတျ ...).
9.Takara Sugiyama Flat ဘား Fixie စက်ဘီးစီး
တစ်ဦးရှေ့နှင့်နောက်အလွိုင်းဘက်ဆွဲဘရိတ် featuring, handcrafted သံမဏိ, Single-speed က Modes သာ FreeWheel, 70032 တာယာများနှင့် 32-အပေါက်အလွိုင်းဘီးတို့သည်အ×, ဒီပြားချပ်ချပ်-bar ကိုပြင်ဆင်ချက်စက်ဘီးဒီခရစ္စမတ်ကာလအတွင်းသင့်အဘ၏မျက်နှာမှအပြုံးများထားရန်သုံးစွဲဖို့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်. (အသေးစိတျ ...)
III.For Tech မှစိတ်အားထက်သန်
10.Pebble သံမဏိစမတ် iPhone အတွက်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နှင့် Android Device ကို (brushed stainless)
ဒီအံ့သြဖွယ် brushed သံမဏိစမတ်လက်ပတ်နာရီနှင့်အတူ, သင့်ရဲ့အဖေကသူ့ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်, မိမိအအီးမေးလ်များကို access, ပြက္ခဒိန်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မိမိအဝင်ခေါ်ဆိုမှုဖြေဆိုနေဆဲကြောင့်မည်သည့်အခိုက်မှာဘယျအရာအချိန်ကိုသိရ. Corning Gorilla Glass နှင့်အဏ္ဏဝါ stainless-သံမဏိမှ Created, there is no reason why your dad will not appreciate this gift item. (အသေးစိတျ ...)
12.Samsung ကဂီယာ2လက်သစ်စမတ်နာရီ
အနက်ရောင်အရောင်ရရှိနိုင်, ဒီထိပ်တန်းထစ် Neo ကိုစမတ်နာရီကို dual function တွေကိုလုပ်ဆောင်မှဖန်ဆင်းထားသည်. ဒါကြောင့်ဿုံသင့်ရဲ့အဖေ၏လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖြတ်ပြီး lapped နှင့်အတူ, သူသည်မိမိဖုန်းနှင့်အခြားအသုံးချမှချက်ချင်းအကြောင်းကြားစာရနိုင်ပါလိမ့်မည်, ခံယူခြင်းနှင့်လုပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု. You can make him happy with this gift. (အသေးစိတျ ...)
13.Samsung ၏ Galaxy Note ကို 8.0 (16GB အထိ, အဖြူ) 2013 ပုံစံ
featuring 16 GB အထိသိုလှောင်, 8-လက်မ display ကို, 1.6GHz အမြန်နှုန်းကို Quad Core Processor, အန်းဒရွိုက် 4.1 Jelly Bean ကို OS နဲ့ microSD card slot, Samsung ၏ Galaxy Note ကို 8.0 တစ်ကြော့မော့အသွင်အပြင်ရှိပါတယ်. ဒါဟာ functions တွေအများကြီးဖျော်ဖြေဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. သငျသညျခရစ္စမတ်အဘို့သင့်အဖေကဒီပစ္စည်းကိုပေးကမ်းခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိမိအဖေ၏အကောင်းတစ်ဦးယောက်ျားလေးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. (အသေးစိတျ ...)
14.Juno ပါဝါ JUNOJUMPR (အပြာရောင်)– အိတ်အရွယ်အစားကိုကားဘက်ထရီခုန် starter နှင့်ခရီးဆောင် charger ကို
ဒါကပဲအချို့သောမိနစ်အတွင်းအသေဘက်ထရီသို့ဘဝဟူ.လည်းကောင်းအတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်. ကနှင့်အတူ, သင့်ရဲ့အဖေမရှိတော့သည့်အခါမိမိအစမတ်ဖုန်းဆိုပြဿနာရှိသည်လိမ့်မယ်, တက်ဘလက်, ကား, ကင်မရာသို့စမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဘက်ထရီပြားချပ်ချပ်ဖြစ်လာ. တစ်ဦးအလေးချိန်နှင့်အတူ7အောင်စ, သင့်ရဲ့အဖေကသူ့ကိုနှင့်အတူကတလျှောက်သယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်. (အသေးစိတျ ...)
15.Logitech, HD Pro ကို Webcam C920, 1080p မြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင် video call နှင့်မှတ်တမ်းတင်ရန်
Logitech, HD Pro ကို Webcam C920 ဂျီမေးလ်စကားသံကိုအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောထားတဲ့ IM န်ဆောင်မှုတွင်ဗီဒီယိုများဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစေသည်, Yahoo က Messenger ကိုနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှ Skype ကို. ကနှင့်အတူ, သင့်ရဲ့အဖေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဓါတ်ပုံကို ယူ. ထိုကဲ့သို့သောတွစ်တာအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းများမှာသူတို့ကို upload နိုင်ပါလိမ့်မည်, YouTube နဲ့ Facebook က. (အသေးစိတျ ...)
အ Debonair နှင့်မထိမခိုက် IV.For
16.Creed အားဖြင့်လူတို့အဘို့အ Creed ငွေတောင်တန်း Eau de Parfum ရေမှုံရေမွှား
ပျော့ပျောင်းသောကတိုးနှင့်ပုလ် finish ကိုအတူ, ဒီမွှေးသောနေ့ရက်ကာလကိုတစ်လျှောက်လုံးသင့်ရဲ့အဖေကောင်းသောအနံ့စောင့်ရှောက်မည်. It isagift that will make him to remember you anytime he wears and receives compliments from loved ones and friends including your dad. (အသေးစိတျ ...)
17.ယောက်ျားသည်အ Valentino အားဖြင့် Valentino V ကို, Eau de Toilette ရေမှုံရေမွှား
ဤသည်ကသူ့အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်. နှောင့်အယှက်တစ်ခုဖက်ရှင်ရိုက်ကူးဖေပူဇော်ဖို့အကောင်းဆုံးဆုလက်ဆောင်ရလိမ့်မည်. ဒီမွှေးကို squirting ပြီးနောက်, သူကသူ့ကိုပတ်ပတ်လည်ကလာသောလူတွေကိုမှမြောက်မြားစွာချီးမွမ်းခံရလိမ့်မည်. The fragrance will stay with him for at least the whole day. (အသေးစိတျ ...)
18.Tommy Hilfiger ယောက်ျားရဲ့ Button ကိုအပေါက်တွေအနားသတ်ရန် Fit Blazer
ကနေဖန်ဆင်းတော် 100% သိုးမွေး, ဒီ Two-button ကိုဝတ်စုံကိုသင့်ရဲ့အဖေတစ်ဦးစုံလင်သောမထိုက်မတန်ပေးနှင့်သူ့အသက်အရွယ်ထက်အငယ်ကိုကြည့်ရှုစေမည်. အဆိုပါဝတ်စုံကိုလည်းတစ်ဦးအခြမ်းပိတ်ဆို့နှင့်ခတ်အိတ်ကပ်တပ်ဆင်ထား. It will makeaperfect gift forafashionista dad. (အသေးစိတျ ...)
19.Philips က Norelco 1250X / 46 မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် 8100
သင့်ရဲ့အဖေကဆက်ပြောသည်အသားအရေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်လိမ်းဆေးသို့မဟုတ်ရေမြှုပ်နှင့်အတူအဆင်ပြေသို့မဟုတ်စိုစွတ်သောအဘို့အခွောကျသှေ့ရိတ် likes ပဲဖြစ်ဖြစ်, Philips က Norelco 1250X / 46 မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက် 8100 will give himaperfect shaving experience keeping his face sparkling like those ofayoung man. (အသေးစိတျ ...)
V.For Movie, ရိုက်ကူး
နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ Created, ဒီထုတ်ကုန်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမဆူညံသံနှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသံကိုထုတ်လုပ်. ဒါဟာဿုံမဆိုအပို device ကိုမလိုဘဲတစ်ဦး HDTV သို့ကိုက်ညီ. ၎င်း၏ 4-button ကိုဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ, your dad will be able to set the sound oozing from the movie he is watching as it will suit him. (အသေးစိတျ ...)
21.Sony က BDV-N7100W 5.1 Channel ကို 3D Blu-ray Disc ကိုနေအိမ်ပြဇာတ်ရုံစနစ် ကြိုးမဲ့နောက်ကြသူများနှင့်အတူ ($549.00)
Equipped with built-in Wi-Fi and wireless rear sound speaker and access blockbuster movies Sony BDV-N7100W 5.1 ရုပ်သံလိုင်း 3D အပြာရောင် -ray ဆိုရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးလက်ဆောင်အဖြစ်ခံယူဖို့ကျေနပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်အိမ်မှာကဇာတ်ရုံဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာတစ်ဦးအထင်ကြီးရုပ်ရှင်သံကိုကမ်းလှမ်း. Your dad will also be able to have it connected to his smartphone if he isasmartphone user. (အသေးစိတျ ...)
22.Samsung က UN32EH5300 32-လက်မ 1080p 60 Hz စမတ် LED HDTV
ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အဖေဝမ်းမြောက်ခြင်း၏မျက်ရည်သူကယ့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးလျှင်သူသည်သင်တို့ထံကလက်ခံတွေ့ဆုံယခုအချိန်တွင်သွန်းလုပ်လိမ့်မည်ဟုလက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါကသင်၏သူ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်အဘို့အရာဖြစ်စေမည်သမျှသော features တွေနှင့်အတူကြွလာ, TV shows and play games as long as he wants. (အသေးစိတျ ...)
23.Sony က BDP-S580 Blu-ray Disc Player ကို
built-in Wi-Fi ကိုတပ်ဆင်ထား, Sony က disc ကိုကစားသမားကဖြစ်နိုင်ခြေအသုံးပြုသူများကအသီးသီး Blu-ray disc ကိုရုပ်ရှင်နှင့် HD နှင့် Full HD ကို 1080p အတွက် 3D Blu-ray ရုပ်ရှင်တွေနှစ်ဦးစလုံးစောင့်ကြည့်ဖို့စေသည်ရဲ့ဒီမော်ဒယ်. ဒါဟာ Android ဖုန်းကိုအခမဲ့ download လုပ်မီဒီယာဝေးလံခေါင်သီ application ကိုတပ်ဆင်ထား, iPhone နဲ့ iPad. (အသေးစိတျ ...)
24.Sony က KDL40W600B 40 လက်မ 1080p 60Hz XR 240 စမတ် LED TV ကို
ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ဒီမော်ဒယ်နှင့်အတူ, သင့်ရဲ့အဖေဒါကြောင့်စစ်မှန်သောရှာဖွေနေအားလုံးပုံရိပ်တွေနဲ့ဓါတ်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်. ၎င်း၏မတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ Opera Mini ကိုအင်တာနက်ဘရောက်ဇာကိုပါဝင်, Skype ကိုနှင့် Twitter. ပါဝင်သည့်တော်တော်များများသွင်းအားစု featuring4HDMI, MHL နဲ့3ယူအက်စ်ဘီ, this product has all it takes to gladden the heart of every movie buffs including your dad. (အသေးစိတျ ...)
25.အဆိုပါ OontZ Angle က Ultra အိတ်ဆောင်ကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုနာယက
အဘယ်အရာကိုမျှအရည်အသွေးအသံနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အသံအတိုးအကျယ်တူ audiophiles စိတျစှဲ. ဒါဟာသင်ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်အဖြစ်သူ့ကိုဤအကြောင်းအရာအားဆက်ကပ်လျှင်သင့်အဖေရလိမ့်မည်ကိုအတိအကျကားအဘယ်သို့. ဒါဟာ iPhone အပါအဝင်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်၏နံပါတ်နှင့်သဟဇာတဖြစ် 6, iPhone ကို 5, iPhone ကို6Plus အား, တက်ဘလက်, Samsung smartphones andawhole lot of others. (အသေးစိတျ ...)
26.ဘို့စ် QuietComfort 15 acoustic ဆူညံသံကိုဖျက်သိမ်းပြီးနားကြပ်
ပြင်းပြင်းထန်ထန်နေသူများကဖန်တီးနှင့်တစ်ဦး 2AAA ဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားပြီး, ဒီနားကြပ်များအတွက်ဂီတကစားနိုင်စွမ်း 35 ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသံနဲ့အနည်းငယ်မျှသာဆူညံသံနှင့်အတူနာရီ. It isagift to gladden the heart of your father with if he is an audiophile. (အသေးစိတျ ...)
27.ဘို့စ် SoundLink Mini ကို Bluetooth ကိုနာယက
တစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးအားပြန်သွင်းနိုင် Battery ကို featuring7နာရီစွမ်းရည်, ဒီကျစ်လစ်သိပ်သည်းစပီကာအဆင့်မြင့်အသံစွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့သွားလာရင်းစဉ်ကသူ့အကြိုက်ဆုံးဂီတကစားရန်သင့်အဖေကို enable လိမ့်မည်. သူတစ်ဦး audiophile သည်ဆိုပါက, it is more likely that he will cherish it more than any other item from you. (အသေးစိတျ ...)
VII.For စွန့်စားမှု / တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တောင်တက်စိတ်အားထက်သန်
28.Celestron SkyMaster ဧရာ tripod Adapter ကို 15 × 70 မှန်ဘီလူး
ဘာမှန်ပြောင်းမပါဘဲ sightseeing ဖြစ်ပါတယ်? အတိအကျ, သူကပတ်ဝန်းကျင် treks နှင့်စူးစမ်းကဲ့သို့သင်တို့အဖေတိုင်းမျက်မှောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှုမြင်ရလိုလိမ့်မည်. သငျသညျသူ့ကို Celestron Sykmaster ဧရာ 15 × 70 tripod Adapter ကိုအတူမှန်ဘီလူးနှငျ့အတူသူ့ကိုပေးအပ်သဖြင့်တစ်ဦးကြိုးအပန်းဖြေအတွေ့အကြုံရှိသည်မှကူညီပေးပါမည်. သူမျက်မှန်ဝတ်ဆင်သို့မဟုတ်မပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒီထုတ်ကုန်အတွက်ရရှိနိုင်ပါအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ, he will be able to have clear view of everything that impresses him. (အသေးစိတျ ...)
အမဲအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံ sightseeing ထိုကဲ့သို့သောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကနေတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်အန္တရာယ်များမှတစျဖျောထုတျ. အမဲလိုက်ဓါး၏ဤအစုနှင့်အတူ, သင့်ရဲ့အဖေဒီလိုတိုက်ခိုက်ဆန့်ကျင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်. သံမဏိဓါးနှင့်ဖွဲ့, this product comes with certificate of Authenticity. (အသေးစိတျ ...)
ဤသည်မြို့ရိုးကိုအနုပညာနာမည်ကြီး Philippe Saint-Laudy အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေတဲ့အသက်ရှုမှားအနုပညာအပိုင်းအစဖြစ်ပါသည်. It isaready-to-hang wall art that will make your dad always proud of you. (အသေးစိတျ ...)
အတိတ်ကာလမှချိတ်ဆက်တဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်သုံးသို့မဟုတျသူ၏အဘိုးအဘွားများ၏သူတို့၏အထိပ်မှာသူ့ကိုများ၏ဓာတ်ပုံများသူနှင့်အတူသားသမီးဖော်ပြရန်သူ့ကိုကိုဖွင်လိမ့်မည်ဟုတစ်မိသားစုသစ်ပင်ကိုထရံကိုအနုပညာထက်သင့်အဘ၏နှလုံး gladden လိမ့်မည်ဟုဘာမှမရှိဘူး. This 107wx90h family tree wall art created in the US will do the trick for him. (အသေးစိတျ ...)
IX. DIY အထူးကုများအတွက်
32.Hitachi KC18DHL 18-Volt lithium-ion 3-Tool ကိုပေါင်းစပ်မှု Kit
စွမ်းအားဖြင့်သော Hitachi KC18DHL 18 ဗို့ lithium-ion ဘက်ထရီတိုင်း DIY အဖေရှိသည်ဖို့ကိုကြိုက်လိမ့်မယ်တဲ့ tool တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. တစ်လိမ်အားနဲ့အတူ 460 အတွက် / ပေါင်, သင့်ရဲ့အဖေမျက်နှာပြင်တစ်အရေအတွက်အပေါ်တူးနိုင်ပါလိမ့်မည်. ၎င်း၏ပေါ့ပါးကဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင့်အဖေနာရီနံပါတ်ထိုသို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရန်အဘို့အစေမည်. (အသေးစိတျ ...)
33.စတန်လေ STMT73795 Mixed Tool ကိုသတ်မှတ်မည်, 210-အပိုင်းအစ
ဒီလာမယ့်သင့်ရဲ့အဖေပျော်ရွှင်စေ ခရစ္စမတ် သူ့ကိုမှတက်ပါရှိသည်တဲ့ tool တစ်ခု box ကိုပေးကမ်းခြင်းဖြင့် 210 ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရည်ရွယ် tools တွေကို. ထိုကဲ့သို့သော tool တစ်ခုနှင့်အတူ, your dad will be happy because he will be able to handlealot of projects by himself. (အသေးစိတျ ...)
ငါသည်သင်တို့ပေါ်မှာရှိသမျှစာရင်းပစ္စည်းများကိုချစ်မျှော်လင့်ပါတယ် အဘယျသို့ခရစ်စမတ်များအတွက်သင့်ဖေ Get ရန်.
F ကိုor More Gift items and Amazon Coupons Visit the Links Below!!
Filed Under: ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များ, အသားပေး Tagged With: birthday gifts for dad, christmas gift ideas for dad, christmas gifts for dad, christmas gifts for dad 2013, christmas gifts for dad 2016, christmas ideas for dad, christmas present ideas for dad, christmas presents for dad, christmas presents for dad from daughter, cool gifts for dad, dad christmas gift ideas, dad christmas gifts, dad christmas presents, dad gifts, dad gifts for christmas, dad presents, gift for dad who has everything, gift ideas for dad, gift ideas for dad christmas, gifts for dad, gifts for dad christmas, gifts for dad for christmas, gifts for dads who have everything, good christmas gifts for dad, good presents for dad, present ideas for dad, presents for dad, presents for dad birthday, presents for dad christmas, unique gifts for dad1, what to buy dad for christmas, what to get dad for christmas, what to get dad for christmas quiz, what to get my dad for christmas, အဘယျသို့ခရစ်စမတ်များအတွက်သင့်ဖေ Get ရန်, what to get your mom for christmas
ခံစားခဲ့ Snowmen တန်ဆာလုပ်ပါရန်ကိုဘယ်လို
ကမကထ Links များ!!
ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကိုစိတ်ကူးများ၏အကောင်းဆုံး အမေဇုံန်ဆောင်မှုများ LLC သည် Associates မှအစီအစဉ်မှာပါဝင်သူဖြစ်ပါသည်, ဆိုဒ်များ Amazon.com မှကြော်ငြာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနေဖြင့်ကြော်ငြာကြေးဝင်ငွေမှတစ်ဦးနည်းလမ်းများပေးဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုပူးတွဲချိတ်ဆက်ကြော်ငြာအစီအစဉ်. ဒီအကြောင်းအရာကို '' ဖြစ်သကဲ့သို့ '' ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်.
မူပိုင်ခွင့် © 2017